Ngethuba lethu lokuphila ngendlela enempilo, okwezemvelo okanye okuthiwa ngamayeza asemvelo aqhelekileyo kwaye adumile, njengoko awancedi kuphela ngezifo ezahlukahlukeneyo, kodwa kwaye inkxaso ngenkxaso ye-immune, ukwandisa ithoni epheleleyo yendalo yonke. Into engasetyenzisiwe kwiyeza zendalo namhlanje! Makhe sithethe ngeempawu ezixhamlayo zolu hlobo lwemveliso, njenge-lapaho-tea.
I-Lapaho-tea yi-cocktail yamaminerali abaluleke kakhulu kunye nezinto ezilandelelanayo. Umphumo weti lapaho emzimbeni womntu uncedo kwizifo ezininzi. Ngokomzekelo, itiye yefowuni isebenza kakuhle ekuphatheni izifo zesikhumba eziqhubekayo.
Isetyenziselwa ukuthintela uxinzelelo lwe-hypertension, atherosclerosis, umdlavuza kunye nesifo sikashukela. Yintoni i-lapaho?
Umthi we-lapaho ukhula eCentral naseMzantsi Melika. I-Incas yayilungiselela itiye ye-bark therapeutic tea, eyayikunceda ukulwa nezifo ezahlukeneyo. Inzala yabo yayisetyenziselwa umgca wangaphakathi lwesigqabi somthi we-lapaho ukunyanzelisa ekwenzeni amanxeba. Ukwenza oku, iziqwenga zebhakede zinyamekisiwe, zinyakanyiswe kwaye zisetyenziswe kwindawo ewonakalisiweyo. I-calla yaseBrazil isebenzisa itiye lepaho njengonyango lwe-leukemia kunye nezinye i-cancer. Nangona kunjalo, i-lapaho ayifumananga ukuzithandwa ngokukhethekileyo phakathi kwabasePutukezi-baseSpain, nakuba kusetyenziswa itiye rhoqo.
Ngowe-1967, umonakalo omkhulu wabangela udliwano-ndlebe kunye noprofesa wase-Argentine wezilwanyana uWalter Akkori. Usosayensi wachaza ukuba ngoncedo lwe-lapaho tea kunokwenzeka ukunciphisa intlungu engenakuxoxwa kwezigulane zomhlaza. Ukongeza, ngokusebenzisa itiye lepaho, banezinga eliphezulu le-hemoglobin egazini kunye nokuphucula ukujikeleza kwegazi. Iyeza zanamhlanje zifunda izixhobo zokuphilisa i-lapaha.
Ngezantsi zingundoqo, zibonakaliswe ngonyango, iipropati zefosholo-itiye:
I-Lapaha-tea ibhekisela kwiziphumo zonyango zeminyaka yamuva. I-naphthoquinones ivuselela i-immune system ukuba iqokelele iiseli ezijikeleza iiseli ezigulayo kwaye zisuse emzimbeni. Ukongezelela, i-lapaho-tea ivimbela ukutshatyalaliswa kwe-glucose emathunjini, kwaye ngoko ke unceda isifo sikashukela. Ngokweziphumo zophando lweYunivesithi yaseMunich, i-lapaho-tea iphatha izifo zesifo se-intestine kwaye, ngokubaluleke kakhulu, ibhubhisa iiseli zesisu kwindawo yokuqala. I-substance yayo esebenzayo i-lapachol inceda ukuphatha izifo zesikhumba ezinomdla kakhulu, umzekelo, i-neurodermatitis, kunye nokusetyenziswa kwangaphakathi kweeti ye-lapacho kufuneka kudibaniswe nokuxinzelelo kwangaphandle.
Ukusela i-lapaho, okokuqala, kufuneka uqonde imigaqo yokupheka i-lapaho-itiye.
Ku-4 iikomityi ezinkulu (0.25 ilitha) yetipa lapaho, thatha iipunipoli ezi-2 zomhlaba we-lapacho bark kunye ne-1 litre yamanzi. Ubilise amanzi, wongeze i-bark uze uyizise. Emva koko unciphisa ubushushu, ubilise itiye eminye imizuzu emihlanu, gubungela kwaye uvumele ukuhlala imizuzu eyi-15. Ekugqibeleni, ubunzima. Kungcono ukuthululela itiye kwi-thermo ukuyiphuza ngexesha lokutshisa.
Ukuze ukwandisa izakhiwo ezixhamlayo kwi-lapaho-tea, kufuneka ufunde ukusela ngokufanelekileyo.
Ukusetyenziswa rhoqo kweeyi kwi-lapaho kubonisa ukuba uxinzelelo lwegazi, luyabamba kwaye luvimbela i-atherosclerosis, umhlaza kunye nesifo sikashukela. Ungaphuzi ngaphezu kweyure eli-1 leeyi ngosuku, ulwahlula zibe ngamaqhekeza.
ISICELO SE-LAPAXO-TEA YOKWENZISWA KWEENKQUBO ZEZIKHONO NENKQUBO YENKQUBO.
Ukusetyenziswa kwangaphandle kweti lapaho kuyasebenza kwizifo zesikhumba ezifana ne-acne, i-eczema, i-fungus emilenzeni, i-dermatitis, i-sunburn, neurodermatitis kunye ne-lichen. Ukongezelela, i-lapaho ikhuthaza ukuphulukiswa kwesilonda. Kungaphandle ukuwusebenzisa ngokugqithiseleyo ngendlela yoxinzelelo.
Letha ii-0.5 ilitha zamanzi kwindawo yokubilisa, uphonsa isipuni se-1 se-lapaho cortex kuyo kwaye ubilise ubushushu obude imizuzu emi-5. Umhluzi uhlanganiswe kwaye maye ume imizuzu eyi-15, ngoko udidi kwaye upholile.
Gcobhoza unyumba, uxoxwe kwiindawo ezimbalwa, ucezu lwe-gauze okanye i-tovas e-lapaho-tea, wring out ubeke isigxina esikhanyayo sesikhumba, esivela ngasentla sinxibe ithawula. Ukuze usebenzise icompress, ungasebenzisa isiqwenga esikhulu sengubo yekotoni, uyifungele umlenze wakho okanye ingalo. Ubungakanani benkqubo enxulumene nemizuzu engama-20. Le compress ingenziwa kathathu ngosuku.
Xa izifo zesikhumba zinceda ukuhlamba kunye nepapaho. Thela ilitha elinesibini elinamandla (saturated) lapaho umhluzi kwindawo yokuhlamba ezele ngamanzi afudumeleyo. Thatha lo kubhada eziliqela ngeveki, ubude benkqubo inemizuzu eyi-15-20.
Phatha intlungu kwiindawo
Umsebenzi wesisu kunye nokungaqhelekanga kokuya esikhathini
Iimvithamini ezona zifanelekileyo kwiimonyo
Iimbangela zokutshatyalaliswa kwepinki kubasetyhini
Iimvumba ze-Varicose kubasetyhini
I-porridge ecebileyo kwaye iluncedo
Tilapia i sibini
Ukusetyenziswa kwezithombe ngaphakathi
Imephu enxulumene nomzimba wesilisa: iindawo ezingekho phantsi kwemimandla engaqondakaliyo
Izimpawu zothando kumantombazana
Isithuba, kutheni ulwalamano oluphela kunye nendlela yokusinda ukuhlukana?
Ukutolika kwephupha: intsingiselo yamaphupha ngemvula
Unyango lweentlanzi kunye neengxaki kwi-homeopathy
Iigwele kunye ne-oat flakes kunye nezithelo ezomisiweyo
Makhe sithethe nge-itch, ukuxhoma kunye nokugula kwemntwana
U-Andrei Malakhov abathunywe ngabaxhasi kunye nesiqwenga esibhedlele, ividiyo